Kaamirooyinka nabadgelyada ee waddooyinka Muqdisho oo la qarxiyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKaamirooyinka nabadgelyada ee waddooyinka Muqdisho oo la qarxiyay
January 30, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kaamirooyinka nabadgelyada (CCTV) ee waddooyinka Muqdisho ayaa lala eegtay qaraxyo goor hore maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Ilaa afar kaamiro ayaa lagu burburshay qaraxa, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray. Mana jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse maleeshiyada Al-Shabaab ayaa horey ganacsatada Muqdisho uga digtay isticmaalka kaamirooyinka CCTV.
Haayada sirdoonka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sanadkii 2019 kaamirooyinka CCTV ka taagtay waddooyinka Muqdisho gaar ahaan Maka Al Mukarama taasoo ay ugu talogashay la socoshada dhaq-dhaqaaqyada Al-Shabaab oo falal argagixiso ka fulisa caasimada Soomaaliya.
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo Buurtinle ka bilaabay olole ay ku soo bandhigayaan qoshahooda
Prime Minister David Cameron is to step down by October after the UK voted to leave the European Union. Speaking outside 10 Downing Street, he said he would attempt to “steady the ship” over [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada al-Shabaab ayaa weerar is-qarxin ah ku qaaday huteel kuyaala bartamaha Muqdisho galabta oo Sabti ah sidoo kale dagaalyahano ayaa gudaha u galay huteelka, sida ay sheegeen booliiska iyo maleeshiyada al-Shabaab. Booliiska [...]
Xasan Shiikh Maxamuud oo sheegay in doorashada dalka wakhtiga loogu talogalay ay ku dhici doonto
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in qabanqaabada doorashooyinka Soomaaliya ay si habsami leh u socoto, ayna ku qabsoomi doonto wakhtiga loogu talogalay, sida lagu sheegay bayaan lagu daabacay website-ka [...]